Alahady – 09/11/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Nony akaiky ny Pakan’ny Jody, ka niakatra tany Jerosalema i Jesoa. Ary hitany tao anatin’ny Tempoly ny mpivarotra omby aman’ondry sy voromahailala ary ny mpanakalo vola nipetraka tao, ka nanao kotopia tamin’ny tady madinika Izy, dia nandroaka azy rehetra mbamin’ny omby aman’ondry hiala amin’ny Tempoly; nararany ny volan’ny mpanakalo vola, nazerany ny latabatra, ary hoy izy tamin’izay nivaro-boromahailala: “Esory eto ireo, fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranon’ny Raiko”. Dia tsaroan’ny mpianany fa efa voasoratra hoe: Ny fitiavako ny tranonao no maharìtra ny aiko. Fa niteny koa ny Jody ka nanao taminy hoe: “Inona no famantarana asehonao aminay no manao toy izao ianao?” Dia namaly azy i Jesoa nanao hoe: “Ravao ity Tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana”. Ka hoy ny Jody: “Enina amby efapolo taona no nanaovana ity Tempoly ity, ka Ianao ve dia hanangana azy indray amin’ny hateloana e?” Ny vatany anefa no Tempoly nolazainy. Ary nony tafatsangan-ko velona Izy, dia tsaroan’ny mpianany fa voalazany izany, ka nino ny Soratra Masina sy ny teny voalazan’i Jesoa izy ireo.